Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - သမိုင်းဆိုင်ရာနောကျဆကျတှဲ
သုတေသနကျင့်ဝတ်မဆိုဆွေးနွေးမှုအတိတ်ထဲမှာသုတေသီများသိပ္ပံ၏နာမ၌အဓမ္မအမှုတို့ကိုပြုမိပါပြီ, အသိအမှတ်ပြုထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရာအဆိုးဆုံးတစ်ခုမှာ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှု (စားပွဲ 6.4) ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1932 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (PHS) မှသုတေသီများရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများစောင့်ကြည့်ဖို့လေ့လာမှုမှာဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူကူးစက် 400 ခန့်အနက်ရောင်ယောက်ျားစာရင်းသွင်း။ ဤသူတို့သညျ Tuskegee, Alabama အဘိဓါန်ပတ်လည်ရှိဧရိယာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အစကတည်းကထံမှလေ့လာမှု nontherapeutic ရှိ၏ ဒါဟာမျှသာအနက်ရောင်ယောက်ျားအတွက်ရောဂါ၏သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု-သူတို့က "မကောင်းတဲ့အသှေးကို" ၏လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကတညျးသူတို့ဆစ်ဖလစ်သေစေတတ်သောရောဂါဖြစ်ပါသည်သော်လည်းအယူမှားနှင့်အထိရောက်မှုကုသမှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. လှည့်ဖြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတိုးတက်အဖြစ်, ဆစ်ဖလစ်များအတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောကုသမှုဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒါပေမယ့်သုတေသီတက်ကြွစွာတခြားနေရာကုသမှုရတဲ့အနေဖြင့်သင်တန်းသားများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြားဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်, သူတို့ကတပ်မတော်နေ့ထဲသို့ဝင်ခဲ့ယောက်ျားရရှိထားမယ်လို့ကုသမှုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်လေ့လာမှုမှာလူအပေါငျးတို့များအတွက်သုတေသနအဖွဲ့ကလုံခြုံမူကြမ်းရွှေ့ဆိုင်းကာလအတွင်း။ သုတေသီများသင်တန်းသားများကိုလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအနှစ် 40 ဂရုမစိုက်ငြင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဘုံခဲ့ကြောင်းအစွန်းရောက်မညီမျှမှုတစ်ခုနောက်ခံဆန့်ကျင်ရာအရပ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ 40 နှစ်တာသမိုင်းကျော်, လေ့လာမှုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှစ်မျိုးလုံးသုတေသီများများစွာ, ပါဝင်ပတ်သက်။ နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သုတေသီများအပြင် ပို. အများအပြားဆေးပညာစာပေထုတ်ဝေလေ့လာမှု၏ 15 အစီရင်ခံစာများတဦးတည်းကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီရမယ် (Heller 1972) ။ အလယ်ပိုင်း 1960-အကြောင်းကိုခုနှစ်တွင်ရောဘတ် Buxtun အမည်ရှိလေ့လာမှုစတင်-30 နှစ်ကြာ PHS န်ထမ်းသူကငျြ့တရားအဓမ္မထည့်သွင်းစဉ်းစားသောလေ့လာမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ PHS အတွင်းတွန်းစတင်ခဲ့သည်။ Buxtun တုံ့ပြန်ခုနှစ်, 1969 ခုနှစ်, အ PHS လေ့လာမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုလုပ်ဖို့ panel ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်သည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ် panel ကိုသုတေသီများကူးစက်ခံရတဲ့ယောက်ျားကနေကုသမှုနှိမ်ဆက်လက်သင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရပ်တည်ချက်များကိုထင်ဟပ်အတွင်း panel ကိုတဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပင်မှတ်ချက်ချ: "သင်ဤကဲ့သို့သောအခြားလေ့လာမှုများဘယ်တော့မှလိမ့်မည် "ဒါဟာအခွင့်ကောင်းယူ (Brandt 1978) ။ အများအားဖြင့်ဆရာဝန်များကတက်ခဲ့သော All-အဖြူ panel က, အသိပေးသဘောတူညီခကျြအခြို့ကိုပုံစံရယူသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယျ။ ဒါပေမယ့် panel ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေး၏အနိမ့်အဆင့်အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမမှီအုပ်စိုး၏။ အဆိုပါ panel ကသုတေသီဒေသခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိများအနေဖြင့် "အငှားအသိပေးသဘောတူညီခကျြ" ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း, ဒါကြောင့်, အကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ပင်အပြည့်အဝကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, စောင့်ရှောက်မှု၏အခွန်ရှောင်ဆက်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးတော့ Buxtun 1972 ခုနှစ်, ဂျင်း Heller ဟာကမ္ဘာ့ရန်လေ့လာမှုထိတွေ့ကြောင်းသတင်းစာဆောင်းပါးတစ်ခုစီးရီးရေးသားခဲ့သည်တစ်သတင်းစာဆရာဖို့ပုံပြင်ကို ယူ. , ။ ကိုယ်ကသာလေ့လာမှုနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောယောက်ျားကမ်းလှမ်းခဲ့ကျယ်ပြန့်လူထုဒေါသပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 6.4: အ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှု၏တစိတ်တပိုင်းအချိန်လိုင်းကနေအဆင်ပြေအောင် Jones (2011)
1932 ဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 ယောက်ျားလေ့လာမှုအတွက်စာရင်းသွင်းကြသည်; သူတို့ကသုတေသန၏သဘောသဘာဝ၏အကြောင်းကြားကြသည်မဟုတ်
1937-38 အဆိုပါ PHS ထိုဒေသတွင်မိုဘိုင်းကုသမှုယူနစ်ပို့ပေးပေမယ့်ကုသမှုကိုလေ့လာမှုအတွက်လူတို့သညျအဘို့အဆီးအတားဖြစ်ပါတယ်
1942-43 ဆေးကုသမှုခံယူရာမှလေ့လာမှုမှာလူတို့သညျကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် PHS ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဘို့ရေးဆွဲခံရမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ intervenes
1950 penicillin ဆစ်ဖလစ်တွေအတွက်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်လာ; လေ့လာမှုမှာလူတို့သညျနေဆဲကုသကြသည်မဟုတ် (Brandt 1978)
1969 အဆိုပါ PHS လေ့လာမှုတစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ် convenes; အဆိုပါ panel ကလေ့လာမှုကိုဆက်လက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်
1972 ပတေရုသ Buxtun, ဟောင်းတစ်ဦး PHS န်ထမ်း, လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းထောက်ကိုပြောတယ်, နှင့်စာနယ်ဇင်းဇာတ်လမ်းချိုး
1972 အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် Tuskegee လေ့လာမှုအပါအဝင်လူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အပေါ်ကြားနာ, ရရှိထားသူ
1997 အမေရိကန်သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်လူသိရှင်ကြားနှင့်တရားဝင် Tuskegee လေ့လာမှုအဘို့တောင်းပန်
ဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူအနည်းဆုံး 22 သားမယား, သားသမီး 17 နှင့်2မြေးကုသမှု၏အခွန်ရှောင်၏ရလဒ်အဖြစ်ထိုရောဂါကူးစက်ခဲ့ကြပေမည်: ဤလေ့လာမှု၏သားကောင်များမရရုံ 399 ယောက်ျား, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်းတို့၏မိသားစုများပါဝင်သည် (Yoon 1997) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်အဆုံးသတ်ရှည်လျားပြီးနောက်ဆက်လက်။ အာဖရိကအမေရိကန်များဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းထဲမှာရှိခဲ့သောယုံကြည်မှု, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေလည်းထိခိုက်နစ်နာဖို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှောင်ရှားရန်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုဦးဆောင်ကြစေခြင်းငှါယုံကြည်မှုတစ်ခုတိုက်စားမှုလေ့လာမှု-တရားမျှတ-လျော့နည်းသွား (Alsan and Wanamaker 2016) ။ ထို့ပြင်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း 1980 နဲ့ 90 ခုနှစ် HIV / AIDS ရောဂါကုသရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှောင့်နှေး (Jones 1993, chap. 14) ။
ယနေ့ဖြစ်ပျက်ဒါကြောက်မက်ဖွယ်သုတေသနလုပ်ငန်းစိတ်ကူးဖို့ခက်ပေမဲ့, ငါဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးသုတေသနလူများအတွက် Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုကနေသုံးအရေးကြီးသောသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာကရိုးရိုးဖြစ်ပျက်မဖြစ်သင့်ကြောင်းအချို့လေ့လာမှုများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာကြောင့်သုတေသနလုပ်ငန်းသုတေသနပြီးစီးခဲ့ပြီကြာမယ့်သင်တန်းသားများ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအသိုင်းအဝိုင်းထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသုတေသီတွေကကြောက်မက်ဘွယ်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ တကယ်တော့ငါကဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ဒါကြောင့်များစွာသောလူဟာအချိန်ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောကာလကိုကျော်ထိုကဲ့သို့သောရွားလှဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ယနေ့သုတေသီများတှငျအခြို့ကိုကွောကျရှံ့ကြဉ်းသင့်တယ်ထင်တယ်။ နှင့်အညီ, ကံမကောင်းတာ, Tuskegee ထူးခြားသောမရှိနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်၏ ဒီခေတ်အတွင်းပြဿနာလူမှုရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသန၏အခြားဥပမာရှိကြ၏ (Katz, Capron, and Glass 1972; Emanuel et al. 2008) ။
1974 ခုနှစ်, Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုနှင့်သုတေသီများဤသည်အခြားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများတုံ့ပြန်အတွက်အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဇီဝဆေးပညာနှင့်အပြုအမူသုတေသနလူ့ဘာသာရပ်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အမျိုးသားကော်မရှင် created နှင့်လူ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်။ အဆိုပါ Belmont ညီလာခံ Center မှာတှေ့ဆုံ၏လေးနှစ်ပြီးနောက်အုပ်စု Belmont အစီရင်ခံစာ, bioethics နှင့်သုတေသန၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစိတ္တဇငြင်းခုံမှုများအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာသုံးကဏ္ဍများရှိပါတယ်။ အလေ့အကျင့်များနှင့်အကြားပထမဦးဆုံး-နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအတွက်သုတေသန-အစီရင်ခံစာသည်၎င်း၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လေ့လာခွင့်မရရှိခဲ့ထွက်သတ်မှတ်။ အထူးသဖြင့်, သူကနေ့တိုင်းကုသမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများလည်းပါဝင်သည်သောယေဘုယျအသိပညာရှာကြံထားတဲ့သုတေသနများအကြားခွဲခြားမှု, အလေ့အကျင့်, အဘို့စောဒကတက်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည် Belmont အစီရင်ခံစာ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူကိုသာသုတေသနလျှောက်ထားကြောင်းစောဒကတက်သည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်အလေ့အကျင့်များအကြားကဒီဂုဏ်ထူးအဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်လူမှုရေးသုတေသနမှကောင်းစွာသင့်လျော်မဟုတျကွောငျးတလမ်းတည်းကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သ (Metcalf and Crawford 2016; boyd 2016) ။
အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာ၏ဒုတိယနှင့်တတိယအစိတ်အပိုင်း Persons သုံးခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူ-လေးစားထွက် lay; ကောင်းတဲ့အ; နှင့်တရားမျှတရေး-နှင့်ဤအခြေခံမူသုတေသနအလေ့အကျင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုဖော်ပြရန်။ ဤရွေ့ကား, ငါသည်ဤအခနျး၏အဓိကစာသားထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့သောအခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာကျယ်ပြန့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပေမယ့်အလွယ်တကူနေ့က-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မယ့်စာရွက်စာတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရအသိအမှတ်ပြုထားသည့်အဆိုပါအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းဟုခေါ်တွင်ကြသည်စည်းမျဉ်းများအစုတခုဖန်တီး (မိမိတို့၏အရာရှိတဦးကအမည်အားဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများ, အပိုင်း 46 ၏ခေါင်းစဉ် 45 Code ကို, အပိုဒ်ခွဲအေဒီသည်) (Porter and Koski 2008) ။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းများ, သုံးသပ်အတည်ပြု, နှင့်သုတေသနကြီးကြပ်ဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြရန်, သူတို့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုပျဉ်ပြား (IRBs) ဖိအားပေးရန်နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်နေကြသည်သောစည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းလိုအပ်သောရှစ် lists နှင့်ခြောက်လနေစဉ် Belmont အစီရင်ခံစာ, ထိုအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်အဘို့အတွေးအခေါ်အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုကိုယ်စားပြုမယ်လို့ကျယ်ပြန့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြထားတယ်: အ Belmont အစီရင်ခံစာနှင့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းများအကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်စေရန်, တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ဆြေးြေိံးကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစား တစ်ဦးအသိပေးသဘောတူညီခကျြစာရွက်စာတမ်း၏ optional ကိုဒြပ်စင်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်, ထိုအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းအားလုံးနီးပါးသုတေသနအုပ်ချုပ်။ ထို့ပြင်အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းများစွာသောအဖွဲ့အစည်းများပုံမှန်အားဖြင့်မခွဲခြားဘဲရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်၏, ထိုအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ပျက်သမျှသောသုတေသနဖို့အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းကိုအလိုအလျောက်အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေမခံမယူကြဘူးကြောင်းကုမ္ပဏီများမှလျှောက်ထားမထားဘူး။
ငါ Belmont အစီရင်ခံစာအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်အားလုံးနီးပါးသုတေသီများကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလေးစားထင်ပေမယ့်ဘုံစည်းမျဉ်းများနှင့် IRBs အတူလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်မျက်ဒေါသလည်းမရှိ (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, IRBs သူတို့အရေးပါကျင့်ဝတ်ဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ ယင်းအစားသူတို့ကလက်ရှိစနစ်ကသင့်လျော်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်သို့မဟုတ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သည်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါဘူးဟုယုံကြည်ကြသည်။ ပေးထားသကဲ့သို့ငါသို့သော်ဤ IRBs ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး IRB ၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်လျှင်, သင်အဲဒီလိုသငျ့သညျ။ သို့သော်ငါသည်သင်တို့၏သုတေသန၏ကျင့်ဝတ်ဖို့စဉ်းစားသည့်အခါတွင်လည်းတစ်ဦးအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်ယူရန်သင့်အားအားပေးလိမ့်မယ်။
ဒါကနောက်ခံအလွန်ခေတ္တကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ IRB ပြန်လည်သုံးသပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-based system ကိုရောက်လာပုံကိုအကျဉ်းချုပ်။ ယနေ့ Belmont အစီရင်ခံစာနှင့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောခေတ်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်-အတော်လေးခဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနှင့်အပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အတွက်အထူးသဖြင့်ပြိုပျက်ရာအတွက်ထိုခေတ်ကာလ၏ပြဿနာများပွီးပညာရှိရှိ-တုံ့ပြန်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့သင့်ပါတယ် (Beauchamp 2011)
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ codes တွေကိုဖန်တီးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်အားထုတ်မှုအပြင်, သေးငယ်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေလျော့နည်းလူသိများတဲ့အားထုတ်မှုလည်းရှိကြ၏။ တကယ်တော့, ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်သုတေသနအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများသို့ run ဖို့ပထမဦးဆုံးသုတေသီများလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များမဟုတ်ကြ: သူတို့ကကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအတွက်အထူးသုတေသီများခဲ့ကြသည်။ 1990 နှင့် 2000 ခုနှစ်ကာလအတွင်းကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုတေသီများ botnet များကျော်တာနဲ့အားနည်း password များနှင့်အတူကွန်ပျူတာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏သို့ hacking နဲ့တူသောအရာတို့ကိုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း Ethics မေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှုအတော်များများကောက်ယူ (Bailey, Dittrich, and Kenneally 2013; Dittrich, Carpenter, and Karir 2015) ။ ဤအလေ့လာမှုများ, အမေရိကန်အစိုးရ-အထူးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ (အိုင်စီတီ) ပါဝင်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းညွှန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူဘောင်ရေးသားဖို့အမိမြေလုံခြုံရေးဖန်တီးနေတဲ့အပြာ-ဖဲကြိုးကော်မရှင်များ၏ဦးစီးဌာနမှတုန့်ပြန်ပါ။ ဒီအားထုတ်မှုများ၏ရလဒ် Menlo အစီရင်ခံစာခဲ့ (Dittrich, Kenneally, and others 2011) ။ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုတေသီများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတိအကျလူမှုရေးသုတေသီများအဲဒီကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်သော်လည်း, Menlo အစီရင်ခံစာလူမှုရေးသုတေသီများများအတွက်သုံးအရေးကြီးသောသင်ခန်းစာပေးပါသည်။
ပထမဦးစွာ Menlo အစီရင်ခံစာ Persons, ကောင်းတဲ့အများအတွက်သုံး Belmont အခြေခံမူ-လေးစားထပ်လောင်းအတည်ပြုခြင်း, တရားမျှတမှု-နှင့်စတုတ္ထထပ်ပြောသည်: ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားခြင်း။ ငါသည်ဤစတုတ္ထနိယာမနှင့်မည်သို့ကြောင့်ဤအခနျး (အပိုင်း 6.4.4) ၏အဓိကစာသားထဲမှာလူမှုရေးသုတေသနမှလျှောက်ထားရပါမည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒုတိယ, Menlo အစီရင်ခံစာ၏တစ်ဦးထက်ပိုယေဘုယျအယူအဆဖို့ Belmont အစီရင်ခံစာထဲကနေ "လူ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း" ၏ကျဉ်းမြောင်းသောအဓိပ်ပါယျကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့သုတေသီများအပေါ်ခေါ်ဆို "လူ့-ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူသုတေသန။ " ဟုအဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာ၏အတိုင်းအတာ၏န့်အသတ်ရှိပါတယ် ကောင်းစွာ Encore နေဖြင့်ရုပ်ပြ။ Princeton နှင့်ဂျော်ဂျီယာ Tech မှမှာ IRBs Encore ", လူ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း" မကြီးထို့ကြောင့်ဘုံစည်းမျဉ်းအောက်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဘာသာရပ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Encore ရှင်းလင်းစွာလူ့-ထိခိုက်အလားအလာရှိပါတယ်; ၎င်း၏အများဆုံးအစွန်းရောက်မှာ Encore အလားအလာဖိနှိပ်အစိုးရများကထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရအပြစ်မဲ့လူတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ် IRBs ကခွင့်ပြုလျှင်ပင် ", လူ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း" သုတေသီတစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့, ဥပဒေရေးရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်နောက်ကွယ်မှဝှက်မထားသင့်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းအစားသူတို့က "လူ့-ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူသုတေသန" ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအယူအဆချမှတ်သင့်ပါတယ်သူတို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လူ့-ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအပေါငျးတို့သလက်အောက်ခံသငျ့သညျ။
တတိယ, Menlo အစီရင်ခံစာ Belmont အခြေခံမူလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသက်ဆိုင်သူများကိုချဲ့ထွင်ရန်သုတေသီများတောင်းဆိုလိုက်သည်။ သုတေသနပိုပြီးနေ့က-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများတွင် embedded ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအသက်သီးခြားနယ်ပယ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်နှင့်အမျှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားသုတေသနရာအရပ်ကိုကြာရာများ၌နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်းရန်မယ့်တိကျတဲ့သုတေသနသင်တန်းသားများကိုကျော်လွန်တိုးချဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများရုံသူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုကျော်လွန်ပြီးအမြင်သူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလယ်ပြင်ကိုထပ်တိုးရန်အဘို့အတစ်နည်းမှာ Menlo အစီရင်ခံစာတောင်းဆိုထားသည်။
ဒါဟာသမိုင်းနောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသုတေသနကျင့်ဝတ်များဟာအလွန်အတိုချုပ်သုံးသပ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသုတေသနကျင့်ဝတ်တဲ့စာအုပ်-အရှည်ကုသမှုများအတွက်ကိုတွေ့မြင် Emanuel et al. (2008) သို့မဟုတ် Beauchamp and Childress (2012) ။